Meles oo Kula Dardaarmay in Beeraleydu Iska Kaashadaan Shaqooyinka Horyaal si Loo Hubiyo Xoojinta Horumarka – Rasaasa News
Meles oo Kula Dardaarmay in Beeraleydu Iska Kaashadaan Shaqooyinka Horyaal si Loo Hubiyo Xoojinta Horumarka
Dire Dawa, February 13, 2011 [ras] -R/w Itobiya Meles Senawi, oo ka hadlayey maalinta, sanad guurada shanaad ee beeraleyda iyo guuraa tabcatada qaranka Itobiya oo ka dhacday shalay Dire Dawa, wuxuu yidhi “beeralayda wadanka oo dhan waxaa laga filanayaa in ay xoojiyaan shaqada si loo xaqiijiyo adkaynta houmarka dalka.”
Sanad guurada 5 ee beeraleyda iyo guuraa tabcatada qaranka Itobiya oo maanta ka furmay magaalada Diri Dawa oo lagu xardhay halku dhag ah “waanu rumaysanahay qorshaha shanta sano ee kobaca iyo isbadalka”
Maalita beeraleyda iyo guura tabcatada ee Itobiya, oo ay ka soo qayb galeen beeraleyda degan iyo guura tabtacto, hayado horumarineed, degmooyin, tulooyin iyo xarumo cilmi baadhiseed oo ay tiradoodu gaadhayso 406 ayaa uu abaalmarino siiyey R/wasaraha Itobiya. Waxaana loo aqoonsaday 174 beeraley in loo qaabeeyey maal gashadayaal.
Kulanka ayuu R/w ka yidhi”hadii ay beeraleydu ay muujiyaan ka qayb qaadasho dhab ah waxay yarayn karaan baahida lacagaha qalaad ee dalka, wayna dajin karaan suuqa.”
Wuxuu uu sheegay in kasta oo loo baahan kordhinta shaqo ee wax soo saarka beeraha, hadana beeraleydu waa muhiimada ugu weyn ee keenta isbadalka dhaqaalaha.
Mele, wxuu kula dardaarmay beeraleyda in ay kordhiyaan tacabka beeraha si looga baxo saboolnimada, waana in ay beeraleydu wadaagaan waayo aragnimada ay is dheeryihiin. Waana in la diyaariyaa iskaashatooyin saamiley ah oo casri ah kuwaas oo si dhiiranaanleh u sameeya dhadhaqaaq shaqo xili beeraadka fooda inagu soo haya.
Wasiirka beeraha Tefera Derbew, ayaa asna dhiniciisa ka sheegay nidaamka iyo qorshaha ka qayb qaadashada guulaha horumarinta dalka ee reer miyiga in ay keentay kobac dhaqaale oo dhab ah shantii sano ee tagtay.
Wasiirku wuxuu yidhi waxaada beerahu waxay qortay 8% koradh ah celcelis ahaan sanadkii shantii sano ee ugu dambaysay oo ka badan 6.4% goolkiihore loo qorsheeyey.
Waxaa kale oo uu sheegay in midhaha ka soo go,ay dalagyada muhiimka ah ay kordheen 119 milyan oo kiintaalsanakii 2005 ilaa 180.8 kiintaalsanaka 2010 taas oo quudin kartay 20 milyan oo dad ah sanad.
Lacagta qalaad ee ay keentay waaxda beeruhuwaxaa uu ka badan yahy laban laabka 546.16 milyan oo dollarka Maraykanka ah ilaa iyo1.55 bilyan oo Dollarka Maraykanka ah ayaa lagu sheegay xiliga la qoray.
Waxaa kale oo uu sheegay Tefera qaybaha dhulka ee laga sameeyey kaymaha waxay koradhay 4.1 milyanhektar ilaa iyo6 milyan hektar.
Beeraleyada degan iyo guuraa beeratada dabaal dagaysay waxaa ka maqnaa Degaanka Somalida Itobiya oo isagu daris la ah maamulka Diri Dawa ee marti galiyey maalinta beeraleyda Itobiya.
Qaxootiga Tirada Badan ee Itobiya ee ku Qulqulaya Yemen oo Laga Xaajooday